UPalette Miharu (Iziko elinikwe ilayisenisi nguMthetho weShishini waseRyokan) Ibhafu enkulu yasekuhlaleni, indawo yokupaka, kunye nempahla!
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguﾊﾟﾚｯﾄ三春
· Amagumbi okulala ayi-46
· Iibhedi eziyi-46
Nceda uqiniseke ukuba liziko elinelayisenisi lishishini labahambi. Abasebenzi bolawulo basemsebenzini iiyure ezingama-24 ngosuku. Onke amagumbi ngamagumbi angatshatanga. Iindwendwe zingonwabela ukunxibelelana omnye komnye kwigumbi eliqhelekileyo kunye nebhafu enkulu edityanelweyo ngelixa itshixiwe ngokupheleleyo kwaye inika ingqalelo kubumfihlo.
I-TV, i-air conditioner kunye nefriji ziyafumaneka. Kukho isuphamakethi enkulu phambi kwendawo apho unokuthenga khona ukutya okulula kunye notywala. Kwabo banqwenela ukulungiselela ukutya kwindawo yethu, sibonelela ngezidlo ezimbini kusasa nangokuhlwa ngeeyen ezili-1,300 (kubandakanywa nerhafu).
Indawo yokupaka yasimahla inikezelwa kwiindwendwe ukuba kuqhagamshelwane naye ngexesha lokubhukisha, kwaye ubusuku obulandelelanayo bamkelekile! I-wifi yasimahla iyafumaneka ukuze ukwazi ukucwangcisa uhambo lwakho ngononophelo. Ukuba usebenzisa imoto, unokuphuma kwiDolophu yaseMiharu kwaye ufumane iindawo ezahlukeneyo.
Yindawo efanelekileyo kwabo bafuna ukuphumla kwaye baphilise ukudinwa kwabo ebusuku kwindawo yokulala ezolileyo kwaye baqeshe imoto ukuze bahlole isixeko saseKoriyama.
I-Takashiba Deco Mansion, iBRITOMART, Indlu yeFrog, Indawo yokutyela yokutya okunempilo i-El Mar Garden, njl ... Nceda uchukumise i-charm obungayazi!
◆ Ibhafu enkulu edibeneyo inokusetyenziswa kuphela ngamadoda ◆
• I-shampoo, i-conditioner kunye nesepha yomzimba zifakwe kwigumbi lokuhlambela. Kukho izixhobo zokomisa iinwele ezi-4 kwigumbi lokunxiba.
◆ Kukho igumbi lokuhlambela labasetyhini kuphela ◆ (iishawa ezi-2)
• I-shampoo, i-conditioner kunye nesepha yomzimba zifakwe kwigumbi lokuhlambela. Kukho isomisi seenwele esinye kwigumbi lokunxiba.
≪ Iindawo ezicetyiswayo zokubona abasebenzi≫
☆ Yonwabela imbonakalo entle yamaxesha amane onyaka ☆ Malunga nemizuzu engama-40 ngemoto ukusuka kwiziko lethu!
"Iintyatyambo kunye neDolophu yeMbali iPaki yokuzonwabisa yaseJanohana" (iMotomiya Janohana, isiXeko saseMotomiya, kwisithili saseFukushima)
E-Janohana Park, ezele zizityalo ezityatyambile ngokupheleleyo entlakohlaza, ehlotyeni, nasekwindla, ukongeza kwimisebenzi eqhelekileyo, kukho iminyhadala yeentyatyambo nemephu ngoMeyi, ngoJuni, Julayi, nangoNovemba.
Usenokuziva ulilolo ebusika, kodwa ngokuxhomekeke kwimozulu, indawo enekhephu, isibhakabhaka esihle, neJanohana Palace inokuba yimbonakalo-mhlaba emangalisayo.
Umrhumo wokungeniswa yi-700 yen kubantu abadala kunye ne-400 yen kubantwana, kodwa emva kokuba uyithenge, ngokuzenzekelayo iba yipaspoti yonyaka (ukuqala ngoNovemba).
Le yindawo ecetyiswayo kwabo bathanda iikhamera, abo bafuna ukuva amaxesha onyaka, kunye nabo bathanda ukuhamba.
☆ Unokufumana ubugcisa beceramic ☆ Malunga nemizuzu engama-40 ngemoto ukusuka kwiziko lethu!
"Ihlathi leCeramic Obori Nihonmatsu Kobo" (Ozawa Hara, Isixeko saseNihonmatsu, kwisithili saseFukushima)
Iiyure zokusebenza ukusuka ngo-10:00 am ukuya ku-4:00 emva kwemini (ugcino luyafuneka)
・ Ukugoba ngesandla (500g) 1,620 yen (irhafu ibandakanyiwe)
・ Ukupeyinta ikomityi yeti eyi-1,134 yen (irhafu ibandakanyiwe)
Ikomityi yekofu eyi-1,242 yen (irhafu ibandakanyiwe)
・ Ipleyiti (malunga ne-14 cm ububanzi) yen eyi-1,350 (ibandakanyiwe nerhafu)
* Kuya kuhlawuliswa umrhumo wokuthumela owahlukileyo (ukukhupha kuyenzeka kwakhona)
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------
≪Umyalezo ovela kwiPalette Miharu≫
NgoMatshi 11, 2011, inyikima enkulu yaseMpuma Japan yabangela ingozi yokuvelisa amandla enyukliya eFukushima.
Kusekho uluhlu olubanzi lweendawo ezichongiweyo njengeendawo ekunzima ukuzibuyisela (akukho kungena ngaphantsi kweminyaka eyi-16 ubudala).
Nangona kubonakala ngathi ulwazi lwangoku luvaliwe, i-TEPCO yamkele abahloli kwiiyunithi ze-10,000 ngoku.
(Izicelo zomntu ngamnye azikamkelwa kukhenketho lwamaqela abahlali bendawo, abasebenzi bozakuzo, kunye nabafundi besikolo.)
Ngokubhengeza ulwazi, kuya kwaziwa ngokubanzi ukuba sisebenzela ukuphelisa ugunyaziso ngokukhula elubala.
Ndingathanda ukubona abantu besandisa ukufikelela kwabo kwixa elizayo njengenyathelo lokunyathela ukuba luhlobo luni lwempembelelo yengozi yenyukliya eye yaba nayo kummandla kwaye kwenzeka ntoni ngoku.
Kwihotele yethu, sibeke iincwadi zeefoto kunye neencwadi malunga nesixhobo samandla enyukliya saseFukushima kwindawo eqhelekileyo ukuze iindwendwe zikwazi ukuziphequlula ngokukhululekileyo.
Ukuba uyathanda, singakukhokela malunga nesikhululo samandla senyukliya kangangoko sinakho (ugcino luyafuneka. Kukho inani elincinane labantu elinokukhokelwa, nceda uqhagamshelane nathi. Asikwazi ukutyelela ngaphakathi ngaphandle kwemvume)
Ukwakhiwa ngokutsha kuyafuneka eFukushima.
Nangona ingeyondawo ekunokufikelelwa kuyo ngokulula, into yokuba olu hlolo lukhankanywe ngasentla lwenziwa nangona kukho inkxalabo yokuba iya kuba yindawo yokhenketho kukuba abantu abachaphazelekayo bayazi ukuba ukuthenjwa okulahlekileyo kwindawo evaliweyo akunakuphinda kufumaneke. Ndiyacinga.
Ngokombono wokusebenza kwehotele kwindawo enye, singathanda ukuba abathengi bethu baseFukushima bazi imeko yangoku.
Siyathemba ukuba amava akho eFukushima aya kuhlala ekhumbula ukuba kusekho abantu abangekakwazi ukuphila njengesiqhelo.
Umbuki zindwendwe ngu- ﾊﾟﾚｯﾄ三春
私たちのﾍﾟｰｼﾞを見てくださってありがとうございます。 旅館業法許可施設｢ﾊﾟﾚｯﾄ三春｣です。 2016年6月にｵｰﾌﾟﾝしました。 もともとはBtoBに強みのあるﾎﾃﾙなのですが､来日観光客の皆さん･国内旅行者の皆さんにもご利用いただきたくAirbnbへ登録しました。 駅からは少し離れていますがその分夜は静かに過ごせます。 24時間体制でｽﾀｯﾌが常駐していますので何かあった時は相談してください。 皆様のお越しを心からお待ちしております。
Ngokusisiseko, lutshintshiselwano kuphela lokungena kunye nokuphuma.
Thina kwisakhiwo iiyure ezingama-24 ngosuku, ngoko ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ubuze.
Abasebenzi basenokuba bajikeleza iindawo eziqhelekileyo ukuze bafumane isiqinisekiso sokhuseleko.
Ekuphumeni, siya kujonga iimeko zangaphakathi. Oku kukuphepha iingxaki emva kwenyani. Enkosi ngokuqonda kwakho.
* Asinabasebenzi abanokuthetha iilwimi zasemzini, kodwa siya kwenza konke okusemandleni ethu ukukuhlalisa ngomguquli kunye nephepha elalathayo elixhasa iilwimi ezingama-74.
Inombolo yomthetho: I-Hotels and Inns Business Act | 郡山市保健所 | 郡山市指令保生第１６号
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- 郡山市